साराको मन जित्दै रारा ! (फोटोफिचर) | KTM Khabar
साराको मन जित्दै रारा ! (फोटोफिचर)
२०७४ बैशाख २९ गते १५:५२ मा प्रकाशित
१५ बैशाख । जति हेरे पनि नअघाइने प्रकृतिको खजाना के होला ? नेपालको हकमा धेरैलाई मुगुको रारा तालले त्यही तिर्सना मेटाउँछ, जुन तिर्सना मेटिएर पनि फेरि उग्र भएर आउँछ ।
पाँच वर्षअघिको मुगु र अहिलेको मुगुमा केही परिवर्तन आएछ । पहिले चरम खाद्यान्न अभाव हुने गाउँहरुमा चामल पुगेछ । खाद्य संस्थानले वितरण गर्ने चामल पहिले हारालुछ हुन्थ्यो भने अहिले नबिकेर गोदाममा थन्केको छ ।
अर्कोतिर दुःखद अवस्था पनि देखियो । तराईको चामल गाउँ-गाउँमा त पुग्यो, तर स्थानीय उत्पादन कोदो, गहुँ, जौ, सिमी जस्ता पौष्टिक आहार उत्पादनमा भने मुगुवासीको ध्यान कम जान थालेछ । स्थानीय उत्पादनमा ह्रास आउँदा यस क्षेत्रका बालबालिका र महिला कुपोषणको सिकार भइरहेका छन् ।
मुगुमा गाडी पुगेपछि जुम्ला, सुर्खेत, नेपालगञ्ज र काठमाडौं जान पहिले जस्तो हप्तौं प्लेन कुर्नुपर्ने अवस्था अहिले छैन । बिरामीले उपचारै नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेन । पैसा हुनेले चामलको भातदेखि हरेक कुरा खान सक्छन् ।
तर, दुर्गम गाउँहरुमा भने अझै पनि चरम गरिबी, अभाव र अशिक्षा कायमै छ । महिलाहरु वर्षौंदेखि आङ खस्ने समस्या लुकाउँदै पीडा सहेर बसेकै छन् । आफ्नो खेतीपातीले मात्र वर्षभरि खान नपुग्ने भएपछि अधिकांश पुरुषहरु भारत वा खाडी मुलुकतिर छन् । छोराको आसमा बर्सेनी बच्चा पाउनुपर्ने अवस्था उस्तै छ । महिनावारी र सुत्केरी हुँदा सरसफाइमा ध्यान नदिँदा धेरै महिला विभिन्न खाले रोगको सिकार भइरहेका छन् ।
करिब ३ हजार मिटरको उँचाइमा रहेको ताल । छिनमै नीलो आकास झैं देखिन्छ रारा, छिनमै मोती झैं चम्किन्छ । सफा मौसम भएको दिनमा राराले सात पटक रङ फेर्ने मुगुवासीहरुको कथन छ ।
केही वर्ष अघिसम्म रारा पुग्ने एउटै माध्यम हवाई मार्ग थियो वा जुम्लाबाट हिँडेर जानुपथ्र्यो । तर, अहिले काठमाडौबाट गाडीमा बुटवल, सुर्खेत, कालिकोट हुँदै चौथो दिनमै रारा पुग्न सकिन्छ ।
गाडी चल्न थालेपछि रारामा आन्तरिक पर्यटक निकै बढेको भिलेज हेरिटेज रिसोर्टका म्यानेजर दीपक रावत बताउँछन् । बाटो अझै सहज हुने हो भने स्वदेशी पर्यटक धान्नै नसकिने गरी आउने उनले बताए ।
रारा पुग्ने धोको धेरै नेपालीमा भए पनि त्यहाँ पुग्न सहज अवस्था भने छैन । प्लेनको भर छैन । मोटरबाटो साधारण ग्राभेलसम्म पनि नहुँदा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।